(Sawiro) Roob Dhagaxyaale Ah Oo Hakad Galliyey Ciyaartii Xulalka Belgium Iyo Tunisia
HomeAfrica(Sawiro) Roob Dhagaxyaale Ah Oo Hakad Galliyey Ciyaartii Xulalka Belgium Iyo Tunisia
Ciyaartii saaxiibtinimo ee dhex maraysay xulalka Belgium iyp Tunisia ayaa la hakiyey kadib markii roob dhagaxyaale ah oo xoog badan uu ka kala qaadi waayay magaaladii ciyaartu ka dhacaysay , ciyaaryahanadiina lagu qasbay inay ka baxsadaan oo garoonka ka dareeraan.
Xulka ay dad badani taageersan yihiin koobka aduunka ee Belgium ayaa mid kamid ah kulamada is diyaartinta ah ee kahor koobka aduunka kula ciyaarayay qaranka Tunisia garoonka King Baudoin stadium ee Brussels laakiin roob dabaylo xoogan wata oo dhagaxyo waaweyni la socdaan ayaa qasab ka dhigay in garoonka lagu kala dareero ilaa inta uu qaadayo, roobabkan oo ku dhuftay guud ahaan wadamada Bariga Yurub.
Roobkan ay ka daadanayeen dhagaxaan lagu qiyaasay inay laaleekaayeen kubada Golf-ta lagu ciyaaro ayaa kala caydhiyey ciyaaryahanadii labada xul , 24 miridh oo kaliya markii ciyaartu socotay , natiijaduna gool la’aan ahayd.
Kulanka ayaa dib loo bilaabay 40 daqiiqo kadib markii dhagaxyaalihii istaagay roobkiina qaaday , gudigii garoonka maamulaysayna u arkeen in dib loo ciyaari karo.
Xulka qaranka Tunisia ayaa ku guuldaraystay inuu u soo baxo koobka aduunka sanadkan , laakiin loogu dooray ciyaartan saaxiibtinimo sababta ah inay isku qabsan yihiin oo woqooyiga Afrika wada yaalaan, xulka Algeria oo ay Belgium isku Group ku jiraan.
Algeria iyo Belgium ayaana fooda isku dari doona ciyaarta Furitaanka Group H garoonka Estadio Mineiro bishan June 17 keeda.
Sawirada Halkan Ka daawo (Click-sii Mid Kamid ah Muuqaaladan)
Saawo Sawirada Ciyaarta
Rio Ferdinand Oo Cadhadii Ka Dagey Singapore
Diego Simeone Oo La Ganaaxay & Real iyo Atletico Oo Iyana Ciqaab Mutaystay
Tababaraha kooxda Atletico Madrid, Diego Simeone ayaa ganaax lagu soo rogay kadib markii xidhiidhka kubada cagta ee qaarada Yurub (EUFA) ay ku eedeeyeen ‘Dhaqan Leexsan’ oo uu ku kacay ciyaartii gunaanadka ee horyaalka Naadiyada Yurub ee Sabtidii.kooxdiisa guuldaradu ka soo gaadhay Real Madrid.
Dortmund Oo Daboolka Ka Qaaday Inay Soo Xero Gallisay Bedelka Lewandowski